अल्ट्रासोनिक्सको साथ क्यानाबिस ग्लिसरीन एक्स्ट्र्याक्टको तयारी - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
ग्लिसरीन मा क्यानोबिस निकासी एक क्यान्सोनोइड्स सिधुली सामाग्री देखि सीधे निकालन को लागि एक आरामदायक तरीका हो।
क्यानोबिस ग्लिसरीन ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् कुनै पनि प्रकार कैनबिस इन्फ्लूड प्रोडक्ट जस्ता ट्रेकरेक्चर, vapes, बेकिंग घटक, लोशन आदि।
क्यानबिस ध्यान केन्द्रित गर्न अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष एक श्रेष्ठ विधि हो। Sonication द्वारा, निष्कर्षण उपज धेरै बढेको छ, जबकि केहि समय सम्म निष्कर्षण समय कम हुन्छ।
क्यानोबिस ग्लिसरीन एकाग्र कसरी तयारी गर्ने
एक ग्लिसरीन ट्रेनेचर को परंपरागत ठंड प्रक्रिया को तैयारी को लागि, कैनबिस कन्स सामान्यतया अनुमान को लागि भिगोयो। 90-120 दिन ग्लिसरिनमा सक्रिय पदार्थहरू निकाल्न। चिसो प्रक्रिया धेरै समय-उपभोग हुन्छ, तर यसले छिटो हट निष्कर्षणमा फाइदा उठाउँछ जुन तीव्र यौगिकहरू जस्तै थोरै सीसीसी, सीबीडी, टेस्पेस आदि। अल्ट्रासोनिक निकासी एक गैर थर्मल प्रक्रिया हो, जुन कोठा को तापमान मा जान सकिन्छ। केहि मिनेट भित्र, कनाबिस को सक्रिय यौगिहरुको एक पूर्ण निकासी थर्मल गिरावट को बिना प्राप्त गर्न सकिन्छ। ठुलो प्रक्रिया निष्कर्ष निकासी पनि एक चम्मच ट्रेकरेज मा, किनकी पुराण टेरेस संरक्षित छ।
वनस्पति ग्लिसरीन मा कनीब को अल्ट्रासोनिक निकासी को लागि एक मूल नुस्खा निम्न चरणहरु मा शामिल छ:
खाद्य ग्रेड सब्जी ग्लिसरीन को 400mL (लगभग 8 औंस)
35 ग्राम सूखे कन्नबिस (कल्याण, फूल, पात वा दाल)
कैनबिसको अनुपात: ग्लिसरीन क्यानबिस गुणस्तर र अन्तिम उत्पादनको इच्छित बलमा अनुकूलित हुन सक्छ। वनस्पति ग्लिसरीन र कंकनीस को मात्रा क्रमशः ग्लिसरीइट को इच्छित उत्पादन मात्रा मा माथि या तल को स्वर बनाइन्छ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि कल र फूलबाट निकासीहरू स्वाद हुन्छन्। यद्यपि, प्रभावकारी क्यानोबिनोइडहरू पनि हरूबाट निकाल्न सकिन्छ।
UP400St – 8L उत्तित बैच सेटअपमा क्यानाबिस को अल्ट्रासोनिक एक्सटेक्शन
Decarboxylation (वैकल्पिक): दुवै decarboxylated साथ नै decarboxylated कैनबिस निम्नलिखित चरण मार्फत निकाल्न सकिन्छ। उच्चतम THC क्षमता प्राप्त गर्न, decarboxylation निश्चित रूपमा सिफारिस गरिएको छ। सबैभन्दा प्रभावकारी कैनबिस ट्रेक्चर प्राप्त गर्न, यो क्यान्सिस संयंत्र सामाग्री decarboxylate को लागि सिफारिस गरिन्छ। ओवनमा पकाउने पानामा क्यानोबाइ हटाउन यो सजिलै संग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण, ओवन 240 डिग्री एफ / 115 डिग्री सेल्सियससम्म। 30 देखि 40 मिनेट सम्म कैनबस बेक गर्नुहोस्, हरेक 10 मिनेटको हिसाबमा यो तौल पनि समान हुन्छ। क्यानबिस अगाडी बढि प्रसोधन गर्नु राम्रो भयो।
2.1। तैयारी: सूखी, कुचल कन्नबस संयंत्र को 35 ग्राम को एक ग्लास बीकर मा 400mL वनस्पति ग्लिसरीन संग जोडिएको छ। ग्लिसरिन-कनाबिस मिश्रण संग बीकर एक बडा कंटेनर मा राखिएको छ जो आइस-स्नान हुन्छ। यदि आवश्यक भएमा, बर्फलाई बदल्नुहोस् जब sonication को समयमा पखेर 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा अधिक तापमान को बनाए राख्न को लागि तीव्र गर्मी को गर्मी को सुनिश्चित गर्न को लागि पिक्सेज।
2.2। Sonication: अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण को अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर संग गरिन्छ UP400St S24d40 जांच संग। अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर को जांच (टिप, सींग वा सोनोट्रोड भनिन्छ) UP400St (400W, 24kHz) अनुमानित छ। 4cm सब्जी ग्लिसरीन मा। डिजिटल टच डिस्प्ले 50% मार्फत आयाम सेट गर्नुहोस्। 3-4 मिनेटको लागी मिश्रण को हिसाबले सोच्दै गर्दा अल्ट्रासोनिक जांच को धीरे-धीरे ग्लिसरीन मार्फत जान्छ।
ग्लिसरीसाइट रोक्न: कैनबिस ग्लिसरीन ध्यानबाट बिरुवा भागहरू हटाउन, ग्लिसरीन रोक्नुहोस्। चूंकि ग्लिसरीन चिपचिपा र चिपचिपा भएकोले, एक राम्रो धातु को तनाव या एक स्ट्रेनर थैली को उपयोग को आसान साबित भएको छ।
भण्डारण: एउटा कालो र ठुलो ठाउँमा एक गिलास कन्टेनरमा भण्डार गर्नुहोस्। जब ठीक तरिकाले भण्डारण गरिन्छ, कैनबिस ग्लिसरीन ट्रेकरेन्सले लगभगको शेल्फ जीवन छ। 1 वर्ष।
UP400St अल्ट्रासोनिक क्यानोबिस एक्सटेक्शन (2 एल ब्याच)
माथि उल्लेखित अल्ट्रासोनिक निकासी / इन्फ्युजन प्रक्रिया को लागि वैकल्पिक तरल पदार्थ को रूप मा, नरिवल तेल, जैतून का तेल, canola तेल, या मक्खन प्रयोग गर्न सकिन्छ। नारियल र जैतून को तेल को पसंदीदा गरिन्छ यदि कन्नबस ध्यान को खाद्य कैनबिस पायसन को लागी अगाडी संसाधित गर्नु पर्छ।
क्यानबिस तेलको अल्ट्रासोनिक पायसीकरणको बारेमा बढी जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक शीत निकासी को लाभ
उच्च गति निकासी
थर्मल गिरावट छैन
उच्च उपज, उच्च क्षमता (प्रभावकारी)
उच्च गुणस्तर (aromatic & स्वादिष्ट)
विभिन्न उत्पादन ढाँचाहरूको लागि स्थिर पायसीकरण
क्यानोबिस ई-रस कसरी तयार पार्नु हुन्छ
क्यान्बिस ई-सिसामा ई-रस (वा ई तरल, भिपाको रस) वा भ्याप्पीको रूपमा उपभोग गर्न सकिन्छ। कैनबिस-इन्फ्लेक्टेड ई-रसको ढाँचाको लागि, खाना-ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकोल (पीजी) उत्तम परिणाम प्रदान गर्दछ। वैकल्पिक रूपमा, सब्जी ग्लिसरीन वा सब्जी ग्लिसरीन र प्रोपिलीन ग्लाइकोलबाट मिश्रण (जस्तै अनुपात 7: 3) पनि ईएन सिगरेट कारतूस भर्न क्यान्बिस ई-तरल पदार्थको उत्पादनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
500mL प्रोपिलीन ग्लाइकोल (पीजी)
वैकल्पिक रूपमा, 7:3को राशन सहित सब्जी ग्लिसरीन र प्रोपिलीन ग्लाइको को मिश्रण प्रयोग गर्न सकिन्छ। (7 भागों सब्जी ग्लिसरीन3भागों propylene glycol को लागि)
30 ग्राम ठीक कुचल कन्नबा (सूखे, डिब्बाबक्सिलाइटेड)
अल्ट्रासाउंड एक्स्टेन्शन: बेकरले प्रोपिलीन जेलीको साथ – कैनबिस मिश्रण एक आइस-स्नान सहित ठूलो बस्तुमा राखिएको छ। यदि आवश्यक भएमा, बर्फलाई बदल्नुहोस् जब sonication को समयमा पखेर 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा अधिक तापमान को बनाए राख्न को लागि तीव्र गर्मी को गर्मी को सुनिश्चित गर्न को लागि पिक्सेज।
Sonication: अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण को अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर संग गरिन्छ UP400St S24d40 जांच संग। अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर को जांच (टिप, सींग वा सोनोट्रोड भनिन्छ) UP400St (400W, 24kHz) अनुमानित छ। 4cm सब्जी ग्लिसरीन मा। डिजिटल टच डिस्प्ले 50% मार्फत आयाम सेट गर्नुहोस्। 3-4 मिनेटको लागी मिश्रण को हिसाबले सोच्दै गर्दा अल्ट्रासोनिक जांच को धीरे-धीरे ग्लिसरीन मार्फत जान्छ।
तनाव कैनबिस ई-रस: क्यानबिस ग्लिसरिन ध्यान केन्द्रित गर्न संयन्त्रका भागहरू हटाउन, ग्लिसरिन यद्यपि फिल्टर पेपर वा ठीक जाल खस्छ।
भण्डारण: एउटा कालो र ठुलो ठाउँमा एक गिलास कन्टेनरमा भण्डार गर्नुहोस्। उचित रूपमा भण्डारण गर्दा, कन्नबिस ई-रससँग लगभगको शेल्फ जीवन छ। 12-24 महिना।
हेलस्चरको UIP4000hdT – प्रवाह-मोड मोडमा कनाब को निष्कर्षण को लागि 4kW उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक्स
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ उपकरण
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स शक्तिशाली, विश्वसनीय अल्ट्रासोनिक सिस्टम को लागी तपाईंको आपूर्तिकर्ता हो। हाम्रो अल्ट्रासोनिक प्रणाली बेंच-माथि र पायलट संयन्त्रबाट पूर्ण औद्योगिक प्रोसेसिंगमा सीमित छ। हाम्रो बलियो अल्ट्रासोनिक प्रणालीहरू ब्याच र इनलाइन प्रशोधनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै प्रक्रिया मापदण्डहरूमा सजिलो र सटीक नियन्त्रण निरन्तर उच्च निकासीको गुणस्तर र उच्च प्रक्रिया क्षमता सुनिश्चित गर्दछ।
प्रयोगशाला र पायलटबाट उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक प्रणालीहरू।
एक ग्लिसरीसाइट एक जड़ी बूटी को एक तरल निकाय या अन्य औषधीय पदार्थ को रूप मा ग्लिसरीन को उपयोग को प्रमुख निकासी तरल को रूप मा बनाइन्छ।
ग्लिसरिन (पनि ग्लिसरीन वा ग्लिसरील भनिन्छ) एक शराबको शराब हो। यो एक रङ्गहीन, गंधहीन, चिपचिपा तरल हो जसले मीठो स्वाद र गैर-विषाक्त हुन्छ। ग्लिसरोल रिबोन सबै ट्रिप्लिसराइड्स भनिन्छ। यो व्यापक रूपमा भोजन मा र दबाइहरु को उत्पादनहरु मा प्रयोग गरिन्छ। ग्लिसरोलले तीन हाइड्रोक्साइल समूहहरू छन् जुन पानी र यसको हाइगोरोपिक प्रकृतिमा यसको घुलनशीलताको लागी जिम्मेवार छन्। ग्वेलसरिन कार्यहरू एक विलायक र एक संरक्षकको रूपमा। ग्लिसरीइटले स्वस्थ स्वाद र शराबको कमीको कारण चिकित्सा वाहक तरल पदार्थको रूपमा फायदेमंद हुन्छन्। ग्लिसरिनको एक अल्कोहल ट्रेक्चरको फाइदा यो तथ्यमा छ कि ग्लिसरिनले वनस्पति तत्वहरूलाई बर्खास्त गर्दैन किनकी शराबले तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्दछ।
क्यानोबिस संक्रमित ग्लिसरीन टेंटिरेन्स राम्रो र अँध्यारो ठुलो ठाँउमा भण्डारण गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरू एकदमै लामो-समय स्थिरता / शेल्फ जीवनलाई शराब आधारित ट्युटेक्चरको रूपमा देखाउँदैनन्। प्रशीतनले स्थिरता बढाउन मद्दत गर्दछ र यसैले सिफारिश गरिएको छ।
क्यानोबिस ग्लिसरीन ट्रेक्चरहरू उत्पादनमा लागत प्रभावी हुन्छन् र औषधि क्यानबिसमा सुरक्षित, शराब-मुक्त खुराक फाराम प्रदान गर्छन्।
डेल्टा 9-टिटिहाइड्रोकोन्याबिनोल (एसएसी) क्यानबिसमा मुख्य मनोवैज्ञानिक पदार्थ हो। एक जीवित, हरी कन्नाब प्लातमा थोरै थोरै समावेश छैन। यसको सट्टा, tetrahydrocannabinolic एसिड (THCA) को एक अपेक्षाकृत उच्च मात्रा पाउन सकिन्छ। THCA कुनै psychoactive प्रभाव देखाउँदैन र यसको कारण हुनेछैन “high” असर। यसैले, THCA psychoactive THC मा बदलिनु पर्छ। THC मा THCA को परिवर्तन decarboxylation द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। Decarboxylation द्वारा, carboxyl समूह -COOH THCA अणुहरु बाट हटाईयो।
Decarboxylation द्वारा, कैनबिस एक आक्रामक भुना भयो वा टोस्ट स्वाद विकसित। तथापि, यदि डिफारबक्सिलिलेशन धेरै फायदाहरूको साथ आउँछ भने, केही प्रयोगकर्ताहरूले प्रोकार र गैर-डेकारबक्सिलाइटेड कनाबिसको उपभोग गर्छन जस्तै decarboxylation सानो मोनोटोपेस र sequiterpenes, phenols, ketones, aldehydes, ईथरहरू, र अनुमानहरू घट्न सक्छ।
मारिजुआना सूखे फूल र महिला क्यान्बिस बिरुवा (प्रायः क्यानबिस संतिका) को टुक्रा र उपजहरू हुन्छन्। यो सबैभन्दा बढी उपभोग गरिएको फारम हो र यसले अनुमान समावेश गर्दछ। 3% देखि 20% THC। मारिजुआना को विशिष्ट, अत्यधिक बर्ड रूपहरु लाई 30% देखि अधिक को THC सामाग्री सम्म पुग्छ। मरिजुआना THC को सबै अन्य किस्महरू - क्यान्बिस उत्पादनहरूका स्रोत स्रोत हुन्। धेरै प्रचुर क्यानोबिनोड, टिटिहाइड्रोसिनभिनोलोक एसिड (THCA) लाई psychoactive THC मा रूपान्तरित गर्न, एक decarboxylation प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। यसैले, डिब्बाबक्सिलेसन प्रक्रियाको कारणले गर्दा कन्नबिस बिरुवा वा यसको अङ्कहरू गर्म हुनुपर्छ। Decarboxylation को समयमा, non-psychoactive THCA psychoactive THC मा परिवर्तित हुन्छ।
हैशिस वा हैश एक केंद्रित राल फारम हो (जस्तै कि केक वा बलको रूपमा बनाइयो) जुन कि थिच्ने कफीबाट वा रिमबाट उत्पन्न हुन्छ जुन रोपनीको सतहबाट स्क्रैप गरिन्छ र बलमा राखिन्छ। यसले शुद्धता र स्रोतको आधारमा कालोदेखि सुनको भूरीको विभिन्न रंगहरूमा पाइन्छ। यो मौखिक रूपमा खपत गरिएको छ (उदाहरणको लागि टिक्नेचर वा खानामा घटकको रूपमा) वा स्लिप गरिएको। धूम्रपानको लागि, विभिन्न खपत प्रकारहरू चिनिन्छन्, उदाहरणका लागि पाइप, हुक्का, बोंग, बुलबलर, भिपाइजर, ह्याट चाकू मार्फत, जोडाहरूमा धुँच्ने, क्यानबिस किने वा तंबाकूसँग मिश्रित वा बोतल टेकको रूपमा धूम्रपान गरिन्छ।
क्यान्बिस टिमर अल्कोहल वा सब्जी ग्लिसरीन मा क्यानोनोनोइड को निकाय लाई बुझाउँछ। क्यानोबिनोइड्स क्यानबिस प्लान्टबाट उच्च-प्रबुद्ध आत्माहरू (प्रायः अनाज अल्कोहल) वा विलायकको रूपमा सब्जी ग्लिसरीन प्रयोग गरेर निकालिन्छन्।
हैश तेल एक कंक्रीट वा चिपचिपा मा ठूलो गठन मा विलायक निकासी द्वारा उत्पादित कैनोनोनोइड को एक गुप्त मैट्रिक्स हो। हैश तेल यसको उच्च स्तर को psychoactive यौगिक THC को कारण सबै भन्दा शक्तिशाली कैनबिस उत्पादनहरु मध्ये एक हो। तरकारी र सुपरक्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइडमा निकाले हैश तेलको प्रयोगले हालै बढेको लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। ह्याश तेल प्रायः अल्ट्रासोनिक रूपमा पाईन्छ। हैश तेल को अल्ट्रासोनिक पायसीकरण को बारे मा अधिक जानने को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस!
इन्फ्यूसन क्यानबिस संक्रमण को विभिन्न प्रकार को संदर्भित गर्नुहोस जो एक विस्तृत विविध प्रकार को गैर-अस्थायी सेल्वेंट्स को द्वारा प्रयोग गर्दछ जो कैनबिस संक्रमण को तैयारी को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो इन्फ्यूजन तयार गर्न, कैनबिस रोप्ने पदार्थलाई विलायकसँग मिल्दछ र त्यसपछि थिचिएको र फलामबाट बिरुवालाई विलायकमा स्थानान्तरण गर्न फिल्टर गरियो। कोको मक्खन, डेयरी मक्खन, पकाउने तेल, ग्लिसरीन, र छालाको अलिस्टराइजहरू सामान्यतया सल्विन्टहरू प्रयोग गरिन्छ। क्यानबिसको अल्ट्रासोनिक निष्कर्षको बारेमा बढि जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
चिकित्सा मारिजुआना क्यानबिस संयंत्र को प्रयोग एक हर्बल उपचार को रूप मा या यसको सक्रिय यौगिकहरुको उपयोग जस्तै सिंथेटिक THC र cannabinoids को उपयोग को संदर्भित गर्दछ। यो प्रयोगको लागि सामान्यतया औषधि पर्चाको आवश्यकता छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ कि कैनबिस वा यसको डेरिभेटिभको प्रयोगमा केमोथेरेपी-प्रेरित प्रेरित विलक्षण र उल्टी, न्यूरोपैटिक दुखाइ र एकाधिक sclerosis को बिरुद्ध सकारात्मक प्रभाव छ।